जब बच्चाको नाममा खोलिएको खातामा एकै पटक करोडौ रकम आयो, त्यो के गरे ! – Taja Khawar
जब बच्चाको नाममा खोलिएको खातामा एकै पटक करोडौ रकम आयो, त्यो के गरे !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०१, २०७८ समय: १७:२४:२८
अहिलेको समयमा बैंकमा खाता खोल्ने कुरा अति सामान्य भएको छ । तर के हुन्छ जब तपाईंको खातामा अचानक करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन्छ ।
उनले त्यो पैसा आफ्नो खाताबाट निकालेर खर्च गर्न थाले । पैसा फिर्ताको लागि बैंकले रणजीत दासलाई धेरै पटक सूचना पठाइसकेको थियो, तर उनले पैसा फिर्ता गर्न मानेनन् । अन्ततः बैंकको तर्फबाट रञ्जित दास विरुद्ध एक एफआईआर दर्ता गरियो । प्रहरीले रञ्जितलाई गिरफ्ता
Last Updated on: September 17th, 2021 at 5:24 pm